5 Ka oge na-aga, ebo niile nke Izrel bịakwutere Devid+ n’ime Hibrọn,+ sị: “Lee! Anyị na gị bụ otu ọkpụkpụ na otu anụ ahụ́.+ 2 Ma ụnyaahụ ma n’oge gara aga+ mgbe Sọl bụ eze anyị, ọ bụ gị na-eduru Izrel apụ ma na-akpọlata ha.+ Jehova wee sị gị, ‘Ọ bụ gị ga-azụ ndị m Izrel dị ka atụrụ,+ ọ bụkwa gị ga-abụ onye ndú+ Izrel.’” 3 Ndị okenye+ niile nke Izrel wee bịakwute eze n’ime Hibrọn. Ha na Eze Devid wee gbaa ndụ+ n’ime Hibrọn n’ihu Jehova. E mesịa, ha tere Devid mmanụ+ ịbụ eze Izrel.+ 4 Devid gbara afọ iri atọ mgbe ọ ghọrọ eze. Ọ chịkwara dị ka eze ruo afọ iri anọ.+ 5 Ọ chịrị Juda dị ka eze ruo afọ asaa na ọnwa isii+ n’ime Hibrọn; ọ chịkwara Izrel na Juda dum dị ka eze ruo afọ iri atọ na atọ na Jeruselem.+ 6 Eze na ndị ikom ya wee gaa Jeruselem ibuso ndị Jibọs+ bi n’ala ahụ agha, ha wee malite ịsị Devid: “Ị gaghị abata ebe a, kama ndị ìsì na ndị ngwọrọ ga-achụghachi gị azụ,”+ n’ihi na ha chere, sị: “Devid agaghị abata ebe a.” 7 N’agbanyeghị nke ahụ, Devid weghaara ebe e wusiri ike nke Zayọn,+ ya bụ, Obodo Devid.+ 8 Devid wee kwuo n’ụbọchị ahụ, sị: “Onye ọ bụla nke ga-ebuso ndị Jibọs agha,+ ya site n’ọwa mmiri+ zute ma ndị ngwọrọ ma ndị ìsì, ndị mkpụrụ obi Devid kpọrọ asị!” Ọ bụ ya mere ha ji asị: “Onye ìsì na onye ngwọrọ agaghị abata n’ụlọ a.” 9 Devid wee biri n’ebe e wusiri ike, e wee kpọọ ya Obodo Devid; Devid wee bido iwu ihe owuwu gbaa gburugburu malite na Milo*+ baa n’ime. 10 Devid wee na-adịwanye ukwuu,+ Jehova bụ́ Chineke nke ụsụụ ndị agha+ nọnyekwaara ya.+ 11 Haịram+ eze Taya wee zigara Devid ndị ozi,+ zigakwara ya osisi sida+ na ndị ọkwá nkà na ndị na-edo nkume maka iwu mgbidi, ha wee malite iwuru Devid ụlọ.+ 12 Devid wee mara na Jehova emewo ka o guzosie ike dị ka eze Izrel,+ na o buliwokwa alaeze ya elu+ n’ihi ndị ya bụ́ Izrel.+ 13 N’oge ahụ, Devid gara n’ihu inwetakwu ndị iko+ na ndị nwunye+ site na Jeruselem mgbe o si Hibrọn lọta; e wee na-amụkwuru Devid ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị. 14 Ndị a bụ aha ndị a mụụrụ ya na Jeruselem: Shamua+ na Shobab+ na Netan+ na Sọlọmọn,+ 15 na Ịbha na Elaịshua+ na Nifeg+ na Jefaya,+ 16 na Elishama+ na Elayada na Elifelet.+ 17 Ndị Filistia wee nụ na e tewo Devid mmanụ ịbụ eze Izrel.+ Ndị Filistia niile wee gbagote ịchọ Devid. Mgbe Devid nụrụ ya, ọ gbadara ebe siri ike mbanye.+ 18 Ma ndị Filistia batara wee na-agagharị na ndagwurugwu Refeyim.+ 19 Devid wee jụọ Jehova ase,+ sị: “Ọ̀ bụ m gbagoo buso ndị Filistia agha? Ị̀ ga-enyefe ha n’aka m?” Jehova wee sị Devid: “Gbagoo, n’ihi na m ga-enyeferịrị ndị Filistia n’aka gị.”+ 20 Devid wee bịaruo Bel-perezim,+ Devid wee merie ha n’ebe ahụ. O wee sị: “Jehova akwadawo ndị iro+ m n’ihu m, dị ka ebe mmiri kwadara.” Ọ bụ ya mere o ji kpọọ ebe ahụ Bel-perezim.+ 21 Ha wee hapụ arụsị+ ha niile n’ebe ahụ, Devid na ndị ikom ya wee buru ha pụọ.+ 22 Mgbe e mesịrị, ndị Filistia gbagotere ọzọ+ na-agagharị na ndagwurugwu Refeyim.+ 23 Devid wee jụọ Jehova ase,+ ma ọ sịrị: “Agbagola. Gaa nkọnkọ nkọnkọ ruo n’azụ ha, busokwa ha agha n’ihu ebe ahụ osisi beka jupụtara.+ 24 Ọ ga-erukwa na mgbe ị nụrụ ụda ụkwụ n’elu osisi beka ndị ahụ, ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga-eme ihe ozugbo,+ n’ihi na Jehova ga-agaworị n’ihu gị mgbe ahụ igbu ndị agha ndị Filistia.”+ 25 Devid wee mee otú ahụ, dị nnọọ ka Jehova nyere ya n’iwu,+ o wee gbuo+ ndị Filistia malite na Giba+ ruo Giza.+